दिने भए बिदा देउ « Sansar News
दिने भए बिदा देउ
९ पुष २०७३, शनिबार ०४:२०
देउसीको सिजन त गैसक्यो पाठकवृन्द ! दीपावली २०७३ काटेर त्यसको लगत्तै आएको छठले पनि छाडेर सीमा काटिसकेको छ । तिहारमा भट्याउने ‘दिने भए सिधा देऊ, नदिने भए बिदा देउ’ । भट्याउनेले कर्के नजरको निधारमा नशा तन्काइ दियो, पाठकवृन्द ।
कहि नभाको जात्रा हाडिगाउँमा भनु भने हाडिगाउँ काठमाडौँको प्राचिन सम्पदा बोकेको साँस्कृतिक नगरी हो । अंशुवर्मा र मानदेव बसेको ठाउँ पनि त्यही हो भनिन्छ, पाठकवृन्द । त्यस्तो हाडिगाउँ रहेको काठमाडौँ शहर पनि महामहिम भारतीय राष्ट्रपतिका लागि १ दिन पुरै ठप्प भयो । हुन त हाम्रा नेता जाँदा दिल्लीका सडकमा पनि गाडी खाली गरेर आधा घण्टा रिफ्रेश गराउँछ रे भारतले । नेताहरूले भनेको पत्याउनै पर्यो । कहिले बिदा दिने, कहिले नदिने अलमलका बीच यो पटक बिदा दिएको भन्ने तर्क पनि बलियो नै रह्यो, पाठकवृन्द ।
जे भएपनि भारत भनेको ठूलै राष्ट्र हो क्यारे पाठकवृन्द । हाम्रा विद्या म्याडम दिल्ली पुग्दा भारतले हर्ष बढाईं गरेको खबर पाउने नै छौँ । दिल्लीले १ दिन सारा कामकाज ठप्प पार्ने छ र नेपालको गुण तिर्नेछ । आउनुस् १ पटक फेरि देउसी खेलौँ । हामीलाई दिने भनेको सहयोग अनुदान सिधा देउ ……(किन घुमाइरहन्छौ….?) नदिने भए बिदा त देउ ! हाम्रो हाड त हाँस्छ कमसेकम । कि कसो पाठकवृन्द ।